Nhau - imwe yemapurojekiti makuru ekuchengetedza simba rebhatiri pasi rose
Musi waChikunguru 30, moto wakavapo muAustralia “Victoria bhatiri” rekuchengetedza simba rekushandisa uchishandisa Tesla Megapack system, imwe yemapurojekiti makuru ekuchengetedza simba rebhatiri pasi rose.Tsaona iyi haina kukonzeresa vanhu.Mushure metsaona, Tesla CEO musk tweeted kuti "Prometheus Unbound"
"Victoria bhatiri" pamoto
Maererano neReuters muna Chikunguru 30, iyo "Victoria bhatiri" mumoto yakanga ichiri kuedzwa.Chirongwa ichi chinotsigirwa nehurumende yeAustralia nemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora.Iyo inoshandiswa neFrench renewable energy hofori neoen uye inoshandisa Tesla Megapack bhatiri system.Pakutanga yakarongwa kuti ishandiswe muna Zvita gore rino, ndiko kuti, zhizha reAustralia.
Na10:30 mangwanani iwayo, 13 ton lithium bhatiri muchiteshi chemagetsi yakabatira moto.Maererano neBritish tekinoroji media "ITpro", kupfuura 30 moto injini uye nezve 150 vanodzima moto vakapinda mukununura.Dhipatimendi reMoto reAustralia rakati moto uyu hauna kukuvara.Vakaedza kudzivirira moto kuti usapararire kune mamwe mabhatiri masisitimu echigadzirwa chekuchengetedza simba.
Sekureva kwaNeoen, nekuti chiteshi chemagetsi chabviswa kubva kune gidhi remagetsi, njodzi haizokanganisa magetsi enzvimbo.Zvisinei, moto wacho wakakonzera nyevero youtsi hune muchetura, uye zviremera zvakarayira vagari vomumisha iri pedyo kuti vavhare magonhi namahwindo, vadzime michina yokudziya neyokutonhodza, uye kupinza mhuka dzinovaraidza mumba.Mumwe mukuru wezvesainzi akauya pachiitiko kuti atarise mamiriro ekunze, uye timu yehunyanzvi yeUAV yakatumirwa kuti itarise moto.
Parizvino, hapana chirevo pamusoro pechikonzero chetsaona.Tesla, mupi webhatiri, haana kupindura kumibvunzo yenhau.Mukuru wayo musk tweeted "Prometheus asunungurwa" mushure menjodzi, asi munzvimbo yekutaura pazasi, hapana anoita seaona moto muAustralia.
Kwakabva: Tesla simba rekuchengetedza, National Fire Administration yeAustralia
Zvinoenderana neiyo US vatengi nhau uye bhizinesi chiteshi (CNBC) yakashumwa pamakumi matatu, "Victoria bhatiri" ndeimwe yemapurojekiti makuru ekuchengetedza simba rebhatiri munyika.Nemhaka yokuti Victoria, Australia, kwairi, yakaronga kuwedzera chikamu chesimba rinoshandiswazve kusvika ku50% ne2030, chirongwa chikuru chakadaro chakakosha zvikuru kubatsira nyika kusimudzira simba risina kugadzikana rinogadziriswa.
Kuchengetedzwa kwesimba zvakare yakakosha simba kutungamira kune Tesla.Iyo megapacks bhatiri system mutsaona iyi ibhatiri rakakura kwazvo rakatangwa naTesla kuruzhinji rwevanhu muna 2019. Gore rino, Tesla yakazivisa mutengo wayo - kutanga pamadhora 1 miriyoni, mari yekuchengetedza yegore ndeye 6570 madhora, kuwedzera kwe2% pagore.
Mukufona kwemusangano musi wa26, musk akataura zvakanangana nekukura kwebhizinesi rekuchengetedza simba rekambani, achiti chigadzirwa cheimba chaTesla Powerwall bhatiri chinodiwa chapfuura miriyoni imwe, uye huwandu hwekugadzira megapacks, chigadzirwa cheveruzhinji, chatengeswa ne kupera kwa2022.
Tesla's simba rekugadzira uye kupatsanurwa kwesimba raive nemari yemadhora mazana masere negumi emamiriyoni muchikamu chechipiri chegore rino.Musk anotenda kuti purofiti yebhizimusi rayo rekuchengetedza simba rimwe zuva richawana kana kudarika purofiti yebhizimusi rayo remotokari nemarori.
>> Kwakabva: mucherechedzi network
Nguva yekutumira: Aug-12-2021